Abia Steeti kụkasịrị ụlọ anọ ndị ntọrọ mmadụ ji arụ-ọrụ - NDỊ IGBO KWENU
Home / Ụwa / Ala Igbo / Abia Steeti kụkasịrị ụlọ anọ ndị ntọrọ mmadụ ji arụ-ọrụ
ndiigbokwenu1 April 21, 2016	Ala Igbo Leave a comment 693 Views
Ndị ọchịchị Abia Steeti n’izu ụka gara-aga gbakashịrị ụlọ anọ ndị ntọrọ mmadụ ji arụ-ọrụ dị na Etitiama Mkporo n’ime Ohafia Local Government Area.
Ụlọ anọ a dị be ndịbe Ndinkefa n’ime Amafo, Mkporo, bụ ebe ndị ntọrọ mmadụ na edebe ndị ha si Aba tọrọ.
Mana dịka ndị igbo si kwuo na ụbọchị nile bụ ụbọchị onye ori mana ofu ụbọchị bụ nke onye nwee ihe. Ụbọchị onye nwee ihe ruru mgbe ndị Obodo Amafo chọpụtara na onwere ihe n’adịchaghị ọcha n’eme n’ime ụlọ anọa wee kpọtuta Igwe obodo. Igwe Obodo a wee mee ngwangwa gbaara ndị Ami ama. Ndị ami n’egbughi oge batara n’ime obodo a nwuchie ndị ntọrọ mmadụa mana onye isi ha, Agbai Agbai Kalu si be ndịbe Ndinkefa gbafuo.
Ofu n’ime ndị ntọrọ mmadụa mara ngere elu wee manye n’elu ụlọ otu nwoke, Mazi Ezekiel Samuel. Mana ka ọ chọrọ isi ebeahu gbapụ, elu-ụlo gbapuru oghere ya siri n’elu-ụlo dagbuo onwe ya.
Onye n’enye Gọvanọ ndụmọdụ gbasara nchebe obodo, Captain Awa Agwu mgbe mgbe ọ na-agwa ndị odeakụkọ okwu kwuru sị “nkụtu ụlọ anọa gosiri na Abia steeti kwunyere kpọmkpem na itọrọ mmadụ bụ ihe ọjọọ. Ha kụkasịrị ụlọ ndị ntọrọ a iji gosi mmadụ niile na ọbụghị egwuregwu ka ha n’egwu mgbe ha sị na ha ga-akụkpọ ụlọ ezinụlọ ọbụla nabatara ndị ntọrọ”.
Abia Steeti Ohafia Okezie Ikpeazu	2016-04-21
Tags Abia Steeti Ohafia Okezie Ikpeazu
Previous Abia Steeti ga-akọ osisi akwu ruru nde 7.5 tupu afọ atọ agaa.
Next Futbọl clọbu nile dị n’ala igbo n’eme ọfụma